हातको मात्र होइन, निधारका यी सात रेखा हेरेर पनि व्यक्तिको भूत, भविष्य र वर्तमान थाहा पाउन सकिन्छ | Rajmarga
रेखाहरु मात्र मानिसको हातमा मात्र हुँदैन, बरु अन्य मस्तक अर्थात निधारमा पनि हुने गर्दछ । यी रेखाहरु विभिन्न ग्रहहरुबाट प्रभावित हुने गर्दछन् । समुद्रशास्त्रका अनुसार निधारका सात रेखाहरु हेरेर कुनै पनि व्यक्तिको भूत, भविष्य र वर्तमानका बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ ।
यस्ता छन् ती सात रेखाहरु–
१. शनि रेखा
यो रेखा निधारको सबैभन्दा माथि हुन्छ । यो रेखा धेरै लामो हुँदैन,मात्र निधारको बिचमा मात्रै देखिन्छ । जसको निधारमा यो स्पष्टसँग देखिएको हुन्छ त्यस्ता व्यक्ति गम्भीर स्वभावका हुन्छन् । यस्ता मानिस सफल जादुगर, ज्योतिर्विद वा तान्त्रिकसमेत हुन सक्दछन् ।
२. गुरु रेखा
निधारमा शनि रेखामुनि गुरु रेखाको स्थान हुन्छ । यो रेखा सामान्यतयाः शनि रेखाको तुलनामा केही लामो हुन्छ । जसको निधारमा यो रेखा लामो र स्पष्ट देखिन्छ, त्यस्ता व्यक्ति आत्मविश्वासी वा आफ्नो कुरामा पक्का हुन्छन् । यस्ता मानिस सरकारी जागिर वा शिक्षाको क्षेत्रमा आफ्नो नाम कमाउन सफल हुन्छन् ।
३. मंगल रेखा
यो रेखा गुरु रेखामुनि हुन्छ । जसको निधारमा यो रेखा स्पष्ट र शुभ गुणका साथ हुन्छ, त्यस्ता व्यक्ति साहसी, स्वाभिमानी, वीर, धर्मालु, दूरदृष्टि राख्ने, समझदार एवं रचनात्मक प्रवृत्तिका हुन्छन् । यस्ता मानिस कुनै पनि प्रशासनिक पदमा, सेना वा प्रहरीका अधिकार वा राजदूत बन्न सफल हुन्छन् ।
४. बुध रेखा
यो रेखाको स्थान करिबकरिब निधारको बिच भागमा हुन्छ । यो रेखा लामो हुन्छ र कहिलेकाँहि त व्यक्तिको दुवै कन्चटको कनारलाई स्पर्श गरिरहेको देखिन्छ । यो रेखा शुभ गुणहरुले युक्त हुन्छ तब यस्ता व्यक्ति तिब्र स्मरणशक्ति भएका, कलात्मक काममा रुची राख्ने, सहीगलतको सोच राख्ने खालका हुन्छन्।
यो बुध रेखाको ठिक मुनिकेवल मध्य भागमा हुन्छ । यो रेखा सानो हुन्छ । यो रेखा स्पष्ट देखिन्छ भने त्यस्ता व्यक्ति स्फुर्तिलो, आशा वा उत्साहले भरिएको हुन्छ । यस्ता मानिस उच्च जीवन शक्तिले युक्त, घुमफिर गर्ने, सौन्दर्यप्रेमी एवं आवश्यक मुद्दामा गम्भीर हुन्छन् ।
६. सुर्य रेखा
यो रेखाको स्थान मानिसको दायाँ आँखाको आँखीभौंमाथि हुन्छ । यो रेखा धेरै लामो हुँदैन । मात्र आँखामाथि सीमित हुन्छ । यो रेखा स्पष्ट देखिन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिल अद्भुत सुझबुझवाला हुन्छन् । यस्ता मानिस अनुशासनमा रहन रुचाउँछन् । उनीहरु आफ्नो सिद्धान्त र व्यवहारबाट मानिसलाई चाँडै नै प्रभावित पार्न सक्ने खालका हुन्छन्।
यो रेखा बायाँ आँखाको आँखीभौंमाथि हुन्छ । यो रेखा सरल, सिधा र स्पष्ट छ भने त्यस्ता व्यक्ति कलाप्रेमी, एकान्तप्रीय, विकसित बुद्धि भएको र कल्पनाशील हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिको रुची चित्रकला, गायन, संगीत आदि क्षेत्रमा हुन्छ ।
Previous post: विवाह मण्डपबाटै दुलहादुलही पक्राउ यस्तो थियो कारण
Next post: अत्यन्त प्रिय छ मलाई यो देशको माटो